စာရေးဆရာဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်အရေး - STEPHEN CHBOSKY နှင့်သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း - နှုန်းထားများ
Stephen Chbosky သည်ဝတ္ထုရေးသူ Perks ofaWallflower ငှား၏ဇာတ်ညွှန်း နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲတွင် Jericho သည်စာအုပ်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းဆိုင်ရာဟောပြောချက်ပေးရန် Penn ပြည်နယ်သို့မကြာသေးမီကရောက်ရှိခဲ့သည်။ Pittsburgh မှမွေးဖွားသည့် Happy Valley သည်သူ၏သွေးပြန်ကြောများကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။ Chbosky ၏မိခင်သည် Penn State ၏ဘွဲ့ရတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးသူသည်တောင်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှဇာတ်ညွှန်းကိုလေ့လာရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသူကိုယ်တိုင်ဒီကိုရောက်လာသည်။
Chbosky နှင့်ထိုင်။ သူ၏ဝတ္ထုများ၊ အရေးအသားလုပ်ငန်းစဉ်၊ သူအကြိုက်ဆုံးသီချင်းအချို့နှင့်သူ၏အကျော်ကြားဆုံးသောလက်ရာများအတွက်လှုံ့ဆော်မှုနောက်ကွယ်ရှိအရာများအကြောင်းသူ့ကိုမေးရန်အတွက် Tab သည်အလွန်ကံကောင်းသည်။
စတီဖင် Chbosky နှင့် The Tab Penn ပြည်နယ်၏အုပ်ချုပ်ရေးအယ်ဒီတာများဖြစ်သော Logan Baumunk
ဒါကြောင့်ဒီ Penn ပြည်နယ်မှာသင်၏ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သနည်း
ကောင်းပြီ, ငါကပညာရှင်ပီသစွာပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ပါပဲ, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာလေးကြိမ်ဖူး။ ကျွန်တော်ဒီကိုပထမဆုံးလာတဲ့အချိန်မှာသူငယ်ချင်းကောင်းဆီသွားဖို့ကောလိပ်မတက်ခင်နွေရာသီပါ။ နောက်ပိုင်းတွင်ငါကင်စတစ်ကာများကိုလာသည်။ စာသားစာသင်ခုံအတွက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်အတူရှိကြောင်း Pittsburgh မှ State College သို့ကားမောင်းသွားသည်။ ထို့နောက်အိမ်သို့တည့်တည့်ပြန်သွားခဲ့သည်။ ပြီးတော့ Perks of Wallflower တစ်ယောက်အဖြစ်ကိုရစ်ပြီးတဲ့နောက်ဂျာစီကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့အတူ State College ကိုအတန်ကြာမောင်းခဲ့တယ်။
ကောင်းပါပြီ။ မင်းကိုပြန်လာခွင့်ရတာကျေနပ်ပါတယ်။ လာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သငျသညျ Wallflower ဖြစ်ခြင်း၏ Perks ဖော်ပြခဲ့တဲ့, ငါသင်စာအုပ်နှင့်ပတ်သက်။ ဤမျှလောက်များစွာသောမေးခွန်းများကိုဆည်းပူးင့်သေချာပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏ငါတို့သည်လည်းမေးမြန်းဖို့ရှိသည်။ ၀ တ္ထုတွင်အကျော်ကြားဆုံးစာကြောင်းများထဲမှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုံးမဲ့ဖြစ်သည်ဟုငါကျိန်ဆိုသည်။ သို့သော်ဝတ္ထုမှသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလိုင်းမှာအဘယ်နည်း။
စာအုပ်ကငါ့အကြိုက်ဆုံးလိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်။ ငါပြောရမယ်၊ အဲဒီအချိန်ကာလမှာငါတို့ဟာအဆုံးမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ငါကျိန်ဆိုခဲ့တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်အဆုံးမဲ့အဆုံးမဲ့ဟာအမြဲတမ်းပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါရင့်ကျက်လာတာနဲ့အမျှငါတို့ခံထိုက်တဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလက်ခံတဲ့လိုင်းကငါ့အတွက်ထာဝရတည်မြဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ ။
ခင်ဗျားသိတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကိုစရေးပြီဆိုတာနဲ့သူကဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတာငါကြားခဲ့တယ်။ သင်ဝတ္ထုရေးနေစဉ်နှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ရေးသားသနည်း။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်တကယ်အများကြီးပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး။ ငါဇာတ်ညွှန်းရေးသူအဖြစ်လေ့ကျင့်သင်ကြားသောကြောင့်, အရာဖြစ်ပါသည်, ငါ့ DNA ကိုသို့ built ရဲ့။ ငါစာရေးဖို့ထိုင်သောအခါငါဇာတ်ညွှန်းအဖြစ်လုပ်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Perks ၏တတိယမူကြမ်းရေးသောအခါငါပြောပါလိမ့်မယ် , စာအုပ်ကိုငါရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာသိလို့ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ချာလီပြောသောအခါသူ၏သူငယ်ချင်းများသည်ကျောင်းနောက်ဆုံးနေ့တွင်တောင်ပေါ်သို့တက်နေကြကြောင်းသူမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ ငါရိုက်ကူးချင်တဲ့တောင်ကိုသိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုသီးနှံတွေဖုံးအုပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်မကောင်းဘူးလို့မထင်တဲ့အတွက် bleachers ကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအထူးထည့်သွင်းလိုက်တယ်၊ တစ်နေ့နေ့မှာငါအဲဒီလိုရိုက်ကူးချင်လို့ပါ။
စစ်မှန်သောဘဝ၌သင်သိသောလူများကိုဇာတ်ကောင်အချို့ကိုအခြေခံထားကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ ဒီလူတွေအားလုံးကိုဒီဇာတ်ကောင်တွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလို့မင်းသူတို့ကိုပြောဖူးလား။ သူတို့ကအစဉ်အဆက်ကထွက်တွက်ဆခဲ့သလား
ဟုတ်တယ်၊ နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာသင်နားလည်ရမယ်၊ ဒီစာအုပ်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်ကျော်ကထုတ်ဝေခဲ့တယ်၊ ပက်ထရစ်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့သူကသူဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်။ ပြီးတော့ဆမ်ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကသူဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်။ ပြီးတော့ငါ့အဘိုးကတော့သူဘယ်သူလဲဆိုတာသေချာသိတယ်။ ငါပြောရမယ်၊ ငါဘယ်တုန်းကမှမသိခဲ့ဘူးတဲ့ဇာတ်ကောင်ကတော့ Mary Elizabeth ဖြစ်ပြီးစာရေးဆရာတစ်ယောက်က Mary Elizabeth အတွက်ပဲ။ ငါက San မှာရှိတဲ့ Rocky Horror Picture Show ကိုသွားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိလို့ပါ။ Diego, ငါဒီမိန်းကလေးပြပွဲပြေးနေတယ်၊ ​​သူမစင်မြင့်မန်နေဂျာ၊ သူမအသက် ၁၆ နှစ်၊ သူမကအရူးဆံပင်၊ ပြီးတော့သူကလူတိုင်းကိုအမှီသဟဲပြုနေတယ်။ ငါထင်တာမှတ်မိသေးတယ်၊ မင်းသိလား၊ ငါ ၁၀ နှစ်၊ အနှစ် ၂၀ လောက်အလောင်းအစားလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဒီအရာအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားမယ်၊ သူမဟာရုံးခန်းထဲမှာပဲရှိနေ ဦး မယ်။ အရာ ဒါနဲ့ Mary Elizabeth ကဒီမိန်းကလေးအနာဂတ်မှာဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုငါ့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တယ်။
ကောင်းပြီငါလည်း Mary Elizabeth ကိုချစ်တယ် သူမသည်အလွန်တက်ကြွခဲ့သည်။
yeah နှင့်မယ် Whitman သူမ၏တစ် ဦး T. မှသူမ၏ကစား
စတီဗင် Chbosky သည် The Hub ရှိ Heritage Hall တွင်ဟောပြောနေသည်
ကောင်းပြီ၊ ချာလီ၊ သူကငါဟာအထက်တန်းကျောင်းထက်အလယ်တန်းကျောင်းမှာဖြစ်ခဲ့တာထက်အနည်းငယ်ပိုပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်သိပြီ၊ ၁၂ နှစ်အရွယ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကိုဖြတ်သွားတာကိုကြည့်ရတာတကယ်ပျော်စရာမကောင်းဘူး၊ နည်းနည်းတက် အင်း၊ မင်းသိတဲ့အတိုင်းငါရှက်ကြောက်တတ်တယ်၊ သေချာတာပေါ့။ ငါကလူနှင့်ပစ္စည်းပစ္စယစကားပြောဖို့ဘယ်လိုသိတယ်။ ငါဟာလူကြိုက်များတဲ့ကလေးတစ်ယောက်လိုတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အထက်တန်းကျောင်းကကလေးတွေကိုမင်းသိပြီးသားလား။ လူတိုင်းကြင်ကြင်နာနာကြိုက်နှစ်သက်ပေမယ့်မင်းမှာကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့မရှိဘူးလား။ အင်း၊ ငါရေပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်လည်းငါကအနုပညာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး နှင့်အထိခိုက်မခံပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သော်လည်း, ငါရှိရာငါရှိရာ, ရှိ Pittsburgh ၌, အားကစားဖြစ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဘောလုံးကစားနည်းကိုသင်သိသရွေ့အထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်အနုပညာဆန်ခြင်းများကိုသင်ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ငါအားကစားသမားတစ် ဦး ဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့သည်။
နှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်သည်ဘုံတူညီသောအရာအချို့၊ စာဖတ်သူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၌တူညီသည့်အရာများ၊ သူတို့နှင့်ကျွန်ုပ်နှင့်တူညီသည့်အရာများကိုသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏နေရာကိုအမှန်တကယ်ရှာဖွေလိုခြင်းရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘေးဒဏ်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေသောမေးခွန်းဖြစ်သည်ဖြစ်စေလူများကိုမိမိတို့ကိုယ်ကိုအဘယ်ကြောင့်အလွန်ဆိုးရွားစွာဆက်ဆံရသနည်း။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမဆိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုသင်ရှာဖွေလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်စာအုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောလူငယ်များအကြောင်းမှာသူတို့သည်ကျွန်ုပ်ရိုးသားကြောင်းသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကား, ခေါင်းပုံဖြတ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါဘာမှရှောင်ရှားရန်, လူ ဦး ရေအချိုးအစား, ဒါမှမဟုတ်သောအနတ္တမဆိုမှအယူခံဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကိုယ့်ဒီပုံပြင်ကိုငါဘယ်လိုသိတယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးနည်းနဲ့ရေးသားခဲ့တာပါ။ အခြားလူတွေနဲ့လည်းဆက်စပ်မှုရှိတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျမိတယ်။ ငါပြောချင်တာက Perks ဟာငါ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကြောင့်အလွန်မှောင်မိုက်တဲ့အချိန်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်၊ လူတွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်ကငါ့ဆီလာပြီး“ ဒါဟာအံ့သြစရာပဲ၊ မင်းကငါ့ကိုနားလည်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ငါပြောခဲ့တာပါ၊ , ဒါပေမယ့်ဆိုလိုတာကခင်ဗျားနားလည်တယ် ၁ ပြီးတော့အဲဒါကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့၊ ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနဲ့ငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်အကြိမ်ပေါင်းထောင်ချီပြီးပြန်ပေးခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ထင်တယ်၊ အရမ်းကုထုံးနဲ့ကက်သလစ်အရာပါ။
စာအုပ်သည်ပိတ်ပင်ထားသောစာအုပ်စာရင်းအချို့တွင်အဆုံးသတ်သွားသည်။ ထို့ကြောင့်စာအုပ်ဆင်ဆာလုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မည်သို့ယူဆသနည်း။
ငါကိုယ်တိုင်အကြောင်းပြချက်နဲ့စာအုပ်ကိုရေးခဲ့ပေမဲ့လူတွေအတွက်တိတ်ဆိတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ ကော်ဇောအောက်မှာမျောနေမနေသင့်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိမယ်လို့ထင်တယ်။ စာအုပ်နှင့်အနုပညာဆိုင်ရာအခြားအရာများကဘာလုပ်ပေးသည်ဆိုသည့်စကားသည်တိတ်ဆိတ်မှုကိုအဆုံးသတ်ပြီးဤအရာများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည်။ စာဖတ်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏အခြေခံကျသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများတွင်ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းသည်ဗဟုသုတထက်တိတ်ဆိတ်မှုကိုအားပေးသောကြောင့်ဆင်ဆာပြုလုပ်ခြင်းသည်မှားသည်ဟုထင်သည်။ အကယ်၍ အချို့သောမိဘအုပ်စု (သို့) သက်ဆိုင်ရာအဘိုးအဘွားအချို့ကသူတို့၏တစ် ဦး ချင်းကလေးသို့မဟုတ်မြေးကိုကျွန်ုပ်၏ကျောင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏စာအုပ်ကိုဖတ်ခိုင်းစေလိုပါကကျွန်ုပ်အနေနှင့်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြnoနာမရှိပါ။ ကျောင်းသည်မည်သူ့ကိုမျှမဖတ်လိုသောအရာများကိုဖတ်ရန်အတင်းမတိုက်သင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့တရားမျှတမှုနဲ့တန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့တူတူပဲ၊ ဒီလူတွေဟာဒီစာအုပ်ကနေတကယ့်ကိုလေးစားမှုရှိသူတွေကိုဒီစာအုပ်ထဲကလူတွေကိုပြသဖို့တောင်းဆိုလိမ့်မယ်။
Rent အစွမ်းထက်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်ပတ်သက်သည့်မှတ်စုတစ်ခုအနေဖြင့် Rent နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ်မျှဆွေးနွေးကြပါစို့။ ကြောင်းနောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုကဘာလဲ
ငါဂီတကိုနှစ်သက်တယ် ငါအထက်တန်းကျောင်းမှာသူတို့ကိုပြု၏။ အမြဲတမ်းဒီလျှို့ဝှက်ဝမ်းမြောက်မှုပဲ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Pittsburgh နဲ့ဂီတတွေသိလား။ သူတို့ကအမြဲလက် -In- လက်မသွားဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါကချစ်ခဲ့တယ် ထိုအခါငါ Rent တက်လာသောအခါ, ရုပ်ရှင် - ဂီတ, Evita မှလွဲ။ တ ဦး တည်းတကယ်ရှိခဲ့သည်မဟုတ်ခဲ့ဘူးထင်ပါတယ်။ ငါဆိုလို, ဖယ်ဒစ္စနေးပစ္စည်းပစ္စယကနေဆိုလိုပေမယ့်အခြား Evita ထက်အခြားနီးပါးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းတိုက်ရိုက် -action ကိုဂီတရှိခဲ့ဘူး။ ယောနသန်သည် Larson ရဲ့ဂီတမှုတ်သွင်းနှင့်ဇာတ်လမ်းမယုံနိုင်လောက်အောင်ရွေ့လျားနေသည်။
Rent to ဆွဲဆောင်သောအခြားအချက်မှာ Pittsburgh မှဖြစ်ပြီး၊ အပြာရောင်ကော်လာအာရုံခံမှုရှိခြင်းသည်နယူးယောက်စီးတီးတွင်ပြသမှုကိုမြင်သောအခါလူငယ်များအားလုံးသည်အလွန်ကောင်းမွန်ကြသည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ လုယူသောသူသတိပေးချက်, အိန်ဂျယ်ကွယ်လွန်သောအခါ၊ လူငယ်များနှင့်ပရိသတ်ရှိဇနီးများကငိုကြွေးကြသည်။ ကျွန်ုပ်ယောက်ျားအချို့၊ ခင်ပွန်းအချို့ကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကဤကဲ့သို့သောလက်နက်များကိုဖြတ်ကျော်သည်။ ပြီးတော့ငါထင်တယ်၊ ငါဒီယောက်ျားတွေကိုကျော်နိုင်မယ်၊ အချို့ခင်ပွန်းများကျော်ကလူအများစုကအိမ်ငှားခပေးရတာကိုရိုးရိုးသားသားအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်၊ မျှတတဲ့ချဉ်းကပ်မှုနည်းနည်းလေးရှိခြင်းအားဖြင့်ပိုကြီးတဲ့အကြောင်းအရင်းအတွက်ကောင်းကျိုးဖြစ်စေနိုင်တယ် ပြပွဲ, ငါလုပ်ချင်သမျှပါပဲ။ ကြည့်ရှုပါ, ငှားယောနသန်သည် Larson ရဲ့ဖြစ်ပါသည်, ငါပိုကြီးတဲ့ပရိသတ်ကိုကရောက်စေဖို့ကူညီပေးခဲ့ကြတာသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ဝိုး! အလို။ ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းအသစ်။ မေးခွန်းအသစ်တစ်ခုရရန်မည်မျှခက်ခဲကြောင်းသင်နားလည်ပါသလား။
ဒါကငါအမြဲတမ်းမေးမြန်းခံခဲ့ရသည်အကြီးမြတ်ဆုံးမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ Rent မှငါ့အကြိုက်ဆုံးဂီတနံပါတ်ကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ ငါကိုမင်းကိုစစ်မှန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေးမယ်။ မင်းကိုငါပြောရမယ်၊ Life Support - တကယ်တော့ Life Support မဟုတ်ဘူး။ ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ငါတကယ်လားငါလား။ ဂီတအများစုသည်အဓိကဇာတ်ကောင်များကိုသာတွယ်ကပ်နေပြီး၊ ဤအချိန်ကိုယူကြပါစို့။ သူ [Jonathan Larson] ကဒီသီချင်းကို Angel အားပေးပြီးသူဖြစ်လိမ့်မည်။ Tom Collins အားဤသီချင်းကိုပေးနိူင်သည်။ သူကဘယ်သူ့ကိုမှဒီသီချင်းကိုပေးနိူင်တယ်။ သို့သော်အစားသူသည်ဤအခြားဇာတ်ကောင်ကိုထိုအချိန်ကမည်မျှကြီးမားသည်ကိုပြောဆိုရန်နှင့် ၂ မိနစ်အတွင်းတွင်ထိုအချိန်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုန်းကန်မှုကိုအပြည့်အဝဖော်ပြရန်အတွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။
ငါဘဝဆုံးရှုံးမှုကိုငါစွန့်လွှတ်မှာလားငါဘ ၀ ကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုသွားပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ပြောတဲ့အတိုင်းငါ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုဆုံးရှုံးသွားမလား။ အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲတတ်၏။ သူအိမ်သို့ သွား၍ ထိုသီချင်းကိုရေးခဲ့သည်၊ သူကတောက်ပတယ်
Wallflower ဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကော။ သင့်မှာအဆုံးမဲ့ခံစားမှုစိတ်ကူးကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ရှိပါသလား။
အဲဒီတုန်းကသီချင်းတွေများများစားစားရှိခဲ့လို့သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းပြောဖို့ခက်တယ်။ ဒါပေမယ့်စာရင်းထဲမှာပါတဲ့အရာအချို့ - Ride by Vapor Trail, ငါခွေးဘုရားကျောင်းရဲ့ Hunger Strike ကိုငါကြိုက်တယ်။ ပုလဲဂျမ်ကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာကောင်တာနောက်ကွယ်ကသက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်။ ဒီလိုရှည်လျားတဲ့နာမည်ပါ ငါတကယ်ဂစ်တာသမားနှင့်တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်၊ သူကဒီမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းလိုလိုသူလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုပေးခဲ့တယ်။ ကောင်းလိုက်တာ အင်း၊ Nirvana ကဆယ်ကျော်သက်ဝိညာဉ်လိုအနံ့လိုငါပြောခဲ့သလိုပေါ့ U2 အားဖြင့် MLK ။
Spotify မှာသင် playlist လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။
အိုး yeah ငါ Spotify အပေါ်မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကကြိုးစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
yeah ပြီးတော့ထွက် tweet ။
ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ၊ ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူစာပေတွေအကြောင်းစောစောကမေးခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲ၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကအမြဲပြောင်းလဲလိမ့်မယ်မထင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ယဉ်ကျေးမှုဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရတာအံ့သြစရာပဲ။ Spotify နှင့်တွစ်တာနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အင်တာနက်သာဖြစ်သည်။ ဒါဟာထူးခြားတဲ့အချိန်ပါပဲ။
The Tab Penn ပြည်နယ်မှစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Stephen Chbosky နှင့် Sabrina Qiao
အမ်၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါထင်တာကတော့အခြေခံအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်မှုအဆုံးသတ်သွားတယ်။ ထို့ကြောင့်လူများသည်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကိုနားလည်ရန်လက်လှမ်းမီမှုမှာယခု ပို၍ ကြီးမားလာသည်။ ငါကဤလမ်းထားပါလိမ့်မယ်, ငါ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, အင်တာနက်ကယ့်ကို '95 ဆိုပါစို့, ပတ်ပတ်လည်ငါ၏အစက်ဝိုင်းထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာ၏။ အဲဒီမတိုင်ခင်ကငါအထက်တန်းကျောင်းတက်တုန်းက Rocky Horror Picture Show ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာထူးဆန်းတယ်။ ငါချစ်သောဤလူအပေါင်းတို့ကား၊ သူတို့ဘယ်ကလာကြတာလဲ ဒါဟာအခြားကျောင်းများ, အခြားမြို့များခဲ့ပေမယ့်ဗဟိုခဲ့သည်။ ကော်ဖီယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့သည်။ အခြားအရာများရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာပိုပြီးအထီးကျန်ဖြစ်သွားတယ်။ အခုသင် xyz ကိုချစ်တယ်၊ Rocky Horror ပဲဖြစ်ဖြစ် David Bowie ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာအားလုံး၊ သို့မဟုတ်သင့်လိင်သို့မဟုတ်လိင်ဆိုင်ရာလက္ခဏာများအရ ၀ င်ရောက်နေသောအရာအားလုံးကိုအခုခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့၊ သန်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာမင်းတို့နဲ့တူတူပဲ၊ ထိုသို့အနည်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာ, သင်တစ် ဦး တည်းပါပဲသိရန်အများကြီးပိုခက်သည်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတစ်ခါတစ်ရံမှာသင်ဟာမျက်နှာပြင်ကနေတစ်ဆင့်သင်တစ်ကိုယ်တည်းခံစားရလို့ပါ။ ဒါကတစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ပါပဲ။ နှင့်သင်တန်း၏, မုန်းအမုန်းခံရလိမ့်မည်, သူတို့အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကဒီအတွက်တ ဦး တည်းလိုအပ်သောမကောင်းသောအမှုဖွင့်ပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးမှာကောင်းသောမကောင်းတဲ့ထက်သာလွန်သည်ဟုယုံကြည်ကြဘူး။
တီဗွီကောဘယ်လိုလဲ မင်းယေရိခေါမြို့မှာမင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါသိတယ် ။ တီဗွီအရေးအသားကိုပြန်သွားဖို့စဉ်းစားမလား။
မှန်ကန်သောပြသမှုနှင့်မှန်ကန်သောအကြံဥာဏ်အတွက်လုံးဝ။ ရုပ်မြင်သံကြားသည်ခေတ်ဆန်းနေပြီ။ ဒါဟာဒါဟာရွှေရောင်ခေတ်၌တည်ရှိ၏, ကောင်းသောထွက်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ထွက်ရှိပါတယ်ငါရှည်လျားပုံစံလိုအပ်ခံစားခဲ့ရကြောင်းပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုတွေ့လျှင်, ငါနှလုံးခုန်ပြန်လာလိမ့်မယ်။
လမ်းလျှောက်နေသောအသေကောင်များ ။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောပြပွဲပါပဲ။ ငါ Walking Dead ကိုငါကြည့်တဲ့အခါငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာကိုသဘောကျလဲဆိုတာကလုံးဝပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ငါပြတာတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး ရှုံး ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောအဆင့်မှာရဝုဏ်ကိုနားလည်နှင့်စီရင်။ ကျွန်တော်တို့ဟာယေရိခေါရာသီခုနစ်ရာသီရှိခဲ့ရင် , ငါသာ Walking Dead ထက်တစ်ဝက်လောက်ကောင်းသောဖြစ်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည် ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်စာရေးဆရာတွေအတွက်ရည်မှန်းချက်အတွက်ကော၊ ကောလိပ်တစ်ခုမှာပါမောက္ခတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဖူးလား၊ ခင်ဗျားဟာစာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတယ်လို့ခံစားခဲ့ရလား။
ရှင်းနေသည်မှာပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်၊ ဤရည်မှန်းချက်ရှိသည့်စာရေးသူများအားလုံးကို aspiring ဟူသောစကားလုံးကိုမသုံးရန်ပြောပါ။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်: သင်ရေးသားလျှင်သင်တစ် ဦး စာရေးဆရာ။ နာမ်သည်ကြိယာမှလာသည်။ ၎င်းသည်အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ထုတ်ဝေသူ၊ စတူဒီယိုအလုပ်အမှုဆောင်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ကီးဘုတ်နောက်ကွယ်ရှိပုဂ္ဂိုလ် မှလွဲ၍ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှမပြောပလောက်ပါ။ ငါပြောရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကျွန်ုပ်သည် ၁၉၉၇ နွေရာသီတွင် Wallflower ဖြစ်ခြင်း၏အခွင့်အရေးများကိုမူကြမ်းရေးဆွဲခဲ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အေးဂျင့်တစ် ဦး ကိုမရရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကြေညာသူတစ် ဦး မရခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာကျွန်တော်သိတဲ့သူတစ်ယောက်ကြောင့်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်တဲ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးသဘောတူညီချက်ရခဲ့တယ်။ ၁၉၉၇ မှာစာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၈ မှာစာရေးဆရာတစ်ယောက်လို့မပြောချင်ဘူး။ ဒါနံပါတ်တစ်ပါပဲ။
နံပါတ် ၂ ကငါ့ကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေမယ့်သင်တန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်က Stewart Stern ပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်ကိုးနှစ်အရွယ်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏သူရဲကောင်းဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်သို့ရောက်ရှိသောအခါငါမူလကသူ့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနှင့်သူ၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲအများကြီးငါအခုအချိန်မှာငါလုပ်နေတာတ ​​ဦး တည်းကဲ့သို့ငါ - ငါဝင်ရောက် - အခြား NY နှစ်ခုနှင့် Penn ပြည်နယ်ကျော်ကျောင်းကိုရွေးချယ်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ၏ကြင်နာမှု၊ စာဖတ်ခြင်း၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်သူ၏စံနမူနာပြဇာတ်လမ်းများဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုထာဝရပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ Stewart ကို nutshell ထဲထည့်လိုက်ရင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူ့အကြောင်းကိုငါပြောပြမယ်။ Stewart ဟာကလေးဘဝကတည်းက Peter Pan ကိုစွဲလမ်းခဲ့တယ်၊ သူ့ ဦး လေးဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့ခေတ်တုန်းကဟောလိဝုဒ်မှာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ပါ။ ဒါကြောင့်သူကသူ့ဘဝတစျခုလုံးကိုအမှတ်တရစုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအသက် ၈၀ ရှိပြီးသူသည်ဆီယက်တဲလ်တွင်နေထိုင်ပြီးဒေသခံထုတ်လုပ်မှုသည်ဂီတတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လာသည်။ Stewart အကြောင်းသူတို့ကြားသွားပြီးသူ့ပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီး Mr. Stern, သင့်အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဖို့သင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာဒေသခံတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပိုက်ဆံသိပ်မများဘူး။ ပြဇာတ်ရုံ။ ငါတို့လုပ်နိုင်တာဘာရှိလဲ။ သင်ဘာလိုချင်ပါသလဲ? သူက 'ငါကငါးမိနစ်လေအချိန်လိုချင်တယ်။ ' ဒါကြောင့်ဒီအသက် ၈၀ အရွယ်လူကိုကြိုးနဲ့ပတ်ပြီးပညာရှိကိုနာရီဝက်ခန့်ပျံသန်းခဲ့တယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ Stewart Stern ပာသူဖြစ်သည်။ သူပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါငါအကြီးအကျယ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်မစ္စတာ Chbosky ၏စာအုပ်ဆင်ဆာဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာဟောပြောပွဲတွင်သူသည် Wallflower နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေကိုလည်းသူပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ရှင်မရိုက်ခင်အထိဆက်လုပ်မည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ခဲ့ပါ၊ တကယ်လို့မင်းကနောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်အနည်းငယ်အကြာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့လူတွေဟာဒီဇာတ်လမ်းတွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ချင်တာကိုသိရလို့ဝမ်းသာတယ်။
ဒီတော့ဘယ်သူသိလဲ ဒီတစ်ခါလည်းတစ်နေ့ ... မည်သို့ပင်, စတီဖင် Chbosky အကယ်စင်စစ်သူ့အဘို့အနာဂတ်မှာအများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်နှင့် The Tab ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကြည့်ဖို့မစောင့်နိုင်ပါ။